अक्टोबर ९ देखि ११ सम्म दोश्रो एनआरएन विश्व ज्ञान सम्मेलन - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन १६, २०७७
विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण आक्रान्त छ ।
विश्व अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ भने लाखौँ मानिस रोजगारविमुख भएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय, पर्यटनलगायत सबै ठप्पप्रायः छन् ।
कोरोनाका कारण हजारौँ श्रमिक नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्, उनीको व्यवस्थापन र उद्यमशीलताको विकास अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।
अत: यस सम्मेलन कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोनापश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका केन्द्रित हुनेछ ।
साथै सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका विषयमा विज्ञहरुले सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारको सहकार्यमा हुन लागेको यस सम्मेलनमा ४ प्लेनरी सेसन र १५ सिम्पोसियम सेसनको आयोजना हुने छ ।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालमा रहनुभएका विज्ञहरु, र नेपालसँग जोडिएका विदेशी विज्ञहरुका दुई सय भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।
सम्मेलनको निष्कर्षको श्वेतपत्र यसअघि जस्तै सरकारलाई बुझाउने छौँ ।
सम्मेलनको संयोजक डा. हेम राज शर्मा ( महासचिव एनआरएनए ) र सहसंयोजक डा. हरि प्रसाद दाहाल एनआरएनए आइसीसी सदस्य ) रहेका छन् ।
सम्मेलन आयोजनाका लागि विभिन्न सल्लाहकार सम्मिलित समिति समेत गठन गरिएको छ ।